မနဲကြီးလိုက်တက်တာ.. လမ်းမှာတင် ချော်ချော်ကျလို့...
တို့ တို့လဲ နားမလည်ဘူး၊ ခက်တယ်
အမ်း။ တခုခုတော့ လွဲသွားပြီ ထင်တယ်။ အားလုံးပဲ ဆောရီးပါ။
သူရို့ အနောက်က လူတွေက Calculus အရမ်းညံ့တာကိုးဗျ။ ဟီးးးးး ဟီးးးးးးး
ကျွန်တော်လဲ ပါတယ်ဗျ။..... :P
အခုတော့ အတော်ကြိုးစားပြီး လုပ်နေပါတယ်။
သူတို့ ညံ့တဲ့နေရာမှာ ကိုယ်တော်ရင် အနေချောင်တယ်လေဗျ။ သဘောပေါက်တယ်နော်.... :D
ကိုzt အတွေ့အကြုံစုံ တာကိုတော့ မချီးကျူးပဲ မနေနိုင်ပါ။
ဟုတ်တယ်ဗျ။ ကျနော်တို့လဲ ကျောင်းမှာ သချင်္ာအရမ်းတွက်ခဲ့ရတော့ အပြင်လောကမှာလဲ သုံးရမှာပဲထင်ခဲ့တာ..။ ဆရာကလဲပြောတယ်လေ..အင်ဂျင်နီယာနဲ့ ကကူလေတာ သေခါမှခွဲတဲ့..။
အခုတခါ ကျနော် ကျောင်းပြန်ဆက်တက်တော့လဲ
ကျနော်လုပ်တဲ့ အပိုင်းမှာ သချာင်္ကို ခက်ခက်ခဲခဲ ဘာမှ မလုပ်ရပါဘူးဗျာ..။
ဒီက ကျောင်းသားတွေက ကျနော်တို့ သင်ခဲ့ရသလို သချင်္ာတွေ သင်ခဲ့ရပုံ မပေါ်ဘူးဗျ။
အခုလိုအားပေးကြတဲ့ heartmuesum နဲ့မြတနိုး်ကို ဇက်တီမှ ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောငး်။
အမှန်ကတော့သူကစုံတွဲပြောချင်တာပါ. အခွင့်မသာသေးလို့။ ကြိုးစားပါဇက်တီ။
အင်ဂျင်နီယာ တွေတော့ နားလည်ပြီးတော့ အကျိုးရှိမယ်ထင်ပါတယ်..။နောင့် တို့လဲ နားမလည်ပေမယ့်..နဲနဲ တော့ သိရတာပေ့ာ... KO ZT တော်တယ်ဆိုတာကို... း)
မြင့်တော့ မြင့်တယ်ဗျ။ မနည်းကြိုးစားဖတ်သွားသည်။ အမေးအဖြေလေးတွေ ကြိုက်တယ်။
တို့က အင်ဂျင်နီယာလည်း မဟုတ်ပဲ ဘာလို့နားလည်ရတာလဲ..
ဒါလည်း တခုခု မှားနေတာများလား..
စာတွေ စာတွေ ကျောင်းပြန်ကုန်ပီဗျ အခုအချိန်မှာ ဖော်မျူလာတစ်ခုခုများလာမေးရင် ဂူဂဲပဲ အားကိုးရှာလိုက်တာပဲ. ကဲကူလေတာနဲ့ ရရင် ကဲကူလေတာနဲ့ ရှင်းပေါ့ဗျာ..မရရင်တော့အင်တာနက်ထဲက နေရှာဖွေလိုက်တာပဲဗျ..အခုချိန်မှာ ခေါင်းထဲမှာ ဘာမှသိပ်မကျန်တော့သလောက်ပဲဗျ။။။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ doubleတွေကော triple တွေကော ရှိတ်လိုက် ရိတ်လိုက်ရတာဗျာ.........
တခုခု ်မှမလွဲ်ပါ. As I don't know how to type myanmar font, I copy some words from other comments. your post is good.I also didnot understand the application of maths when we was learning in MIT (mandalay Institute of Technology).
ဒီဂရီနဲ့ရေဒီယံပြောင်းတဲ့ဖော်မြူလာကို ခုမှ ပြန်သတိရသည်။
စကားမစပ် အပူချိန်အတိုင်းခံရရင် ဖာရင်ဟိုက်သိချင်လို့ ဆဲဆီးရပ်စ်ကနေ ပြန်တွက်ကြည့်မယ်လုပ်လုပ် 5/9 နဲ့လား 9/5 နဲ့လား မြှောက်တာလား..ဘာလုပ်မှန်းမေ့လိုက်....။
ရေဒီယမ်ဟာ (အက်စ် ညီမျှခြင်း အာ အမြှောက် သီတာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရ) ထောင့်တခုရဲ့ တခြားယူနစ်တခုဖြစ်ကြောင်းပါ။ စင်္ကာပူဒေါ်လာနဲ့
အမေရိကန်ဒေါ်လာလိုပေါ့။ ဗမာပြည်မှာ အနည်းဆုံး ကောလိပ်ပထမနှစ်ရဲ့ သချင်္ာကိုတက်ဖူးမှ နားလည်နိုင်ပါမယ်။ (မသိဘဲနဲ့ ဆရာဝင်လုပ်သွားသည်)
ZT ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေ ဖတ်ရတိုင်း ကျေနပ်သွားတယ်...
ကိုယ်ညံ့ပေမယ့် တော်တဲ့ ကိုယ့်လူမျိုးတွေရှိနေလို့....။
ဖတ်ရင်းနဲ့ တလက်စတည်း စဉ်းစားသွားတယ်
ငါဘာလို့ သေသေချာချာ နားမလည်တာလဲလို့...
Sin တွေ Cos တွေ ရယ် ဒီဂရီနဲ့ ရေဒီယံရယ်...
ကိုယ်ညံ့ပေမယ့် ကိုZT လို တော်တဲ့ ကိုယ့်လူမျိုးတွေ ရှိနေပေလို့သာပဲ....
လိုက်မော့ ကြည့်ရတာ ဇတ်တောင် ငြောင်းသွားတယ်.. ဒါတောင် ကျောင်းတုန်းက မီးချစ် က သချာင်္ကို မညံ့ဘူး..ကိုZT ကတော်တော် မှတ်နိင်တာပဲ..တော်လိုက်တာ..
တော် တော်တား တော်တက်စ် ပါလားနော်
(မမ KOM နဲ့ ပြောင်းပြန်ပြောကြည့်တာ)
ကိုယ်တော့ ငယ်ငယ်တုန်းက သင်ခဲ့ရတာတွေ နှမျောတာ။
ဝေးးး တူတို့ နားမလည်ပေမယ့် နာနားလည်တယ် ZT ရေ ဟဟဟဟ ဟုတ်တယ် သူတို့က calculator သုံးနေကြဆိုတော့ သိပ်မသိဘူးရယ် ငါလေ ရယ်လိုက်ရတာ အူတွေကို နာနေတာပဲ ပြောလိုက်ပါလား ဘယ်လိုရသလဲ ဆိုရင် နင့်အမေ ဘိုးတော် က ပေးတာဟေ့ ဆိုပြီးတော့လေ ဟားးးးဟားးးးးးးးးးး
ဒါနဲ့ တအားရှင်းပြချင်တယ်ဆို တခုလောက်မေးပါရစေ။ program က calculator မှာလို deg ကို လက်မခံဘဲ radium ကိုပဲ လက်ခံတယ်ဆိုတာ ဘယ်လို သိသွားတာလဲဟင်
Microsoft MSDN Library ထဲမှာ ပြန်ကြည့်တာပါ။ :D
ကျောင်းပြီးတာ လပိုင်းပဲရှိသေးတယ် ဒီဂရီ ရေဒီယမ်တွေ မေ့တေ့တေ့ ... ဟိ :D
တစ်ခုခုမမှားပါ။ ဖတ်ရတာ ကျေနပ်သွားတယ်။ ဆင်ဆင်ကိုပြောလိုက်ပါအုံး ဖုန်းထဲက converter software သုံးလိုက်ပါလို့ :D
ကျောင်းတုန်းက calculus ကတော့ သေလုမျောပါး မူးနောက်နေတာပဲ။ ကျောင်းပြီးတော့ ခုထိ သုံးလဲ သုံးရဘူး။ ကိုးတန်းတုန်းက sin cos ကို ပြန်နွှေးပေးလို့ ကျေးဇူးနော်။ ဟုတ်သားပဲ.. ကို zt က အလွန်ခက်တဲ့ degree to radian conversion ကို သွားသုံးတာကိုး ...သူက ဘယ်သိမှာလဲလို့..အဟီး
တစ်ကယ် အကျိုးများတဲ့ ပို့စ်ပါ။
ဒီဂရီတွေ ရေဒီယံတွေ မေ့နေတာကို ပြန်အစဖော်ပေးပါတယ်။
ဆင်ဆင်အတွက် - ဖာရင်ဟိုက်ကနေ ဆဲလ်စီးယပ်စ်ကိုပြောင်းတာကတော့ အလွတ်ကျက်ထားလိုက်ပေါ့။
C is equal to five by nine into F minus 32.
တစ်ခုပဲ ကျက်ပါ။ ကျန်တဲ့ တစ်ခုကိုတော့ ကိုယ့်ဖာကို ပြန်ပြောင်းလိုက်ပါ။ တစ်ခုထဲပဲ မှတ်ပါ။ နှစ်ခုမှတ်ရင်ရောတတ်တယ်။
Thank u Ko Boyz, Thiha Thit & ZT.
ဒီလို မြန်မာလူတော်များရှိတာ ဂုဏ်ယူပါတယ်။
ZT တို့တော့ သေချာ ၂ခေါက်ဖတ်သွားတယ်။ သူများရေးထားတာကို ရှင်းရတာထက် အစက ပြန်ရေးတာ ပိုမြန်တယ်ထင်တာပဲ။ မြန်မာကွ လို့ ဂုဏ်ယူသွားတယ် မောင်လေးရေ
ကိုဇက်တီအတွက် ဂုဏ်ယူသွားပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်တော့ googling ဖြစ်နေတာကြာပီ.. ဟိ း)
ပိုက်သာဂိုးရပ် ကြီးပြောပြတာလို့ ပြောလိုက်ပါလား။ ဒါဆို အဲဒီကောင်ကြီးက မင်းသူငယ်ချင်းလားလို့ မေးမလားမသိဘူးနော်။ :D
ဒါမျိုးပိုစ့်လေးတွေ များများရေးပေးပါဦး.. တကယ်ကို ဖတ်လို့လဲကောင်း ဦးဏှောက်ကိုလဲ ဉာဏ်အလင်းဖွင့်ပေးရာ ရောက်လို့ ကို ဇက်တီမှာ အကျိုးကျေးဇူး များလှပါကြောင်း..
ကိုzt,ကျနော်က အစ်ကို reader တစ်ယောက်ပါ။ကျနာ်အလုပ်လုပ်တဲ ့ကုမ္ပဏီက HYUNDAI AND KIA MOTOR CO,LTD ရဲ ့supplier ကုမ္ပဏီပါ။CNC၊MCT စက်တွေနဲ့့production လုပ်ရပါတယ်။CNC/MCT စက်တွေမှာ ပရိုဂရမ် အလွယ်ရေနည်းနဲ ့အခြေခံသဘောတရားလေးတွေသိချင်ပါတယ်။professional တစ်ယောက်အနေနဲ ့မဟုတ်ပဲ production လုပ်သားတစ်ယောက်နေနဲ့သိသင် ့တာလေးတွေကို ပို ့စ်တစ်ခုနေနဲ ့ဖြစ်စေ၊အီးလ်မေးနဲ ့ဖြစ်စေ ရေးပေးစေချင်ပါတယ်။လေ ့လာလို ့ရမယ်စာအုပ်တွေလည်းလမ်းညွှန်ပေးပါ။